Lalam-pirenena : mamoa-doza hatrany ny taksiborosy | NewsMada
Lalam-pirenena : mamoa-doza hatrany ny taksiborosy
Taksborosy iray, mampitohy an’i Soavinandriana sy Antananarivo nivadika tao amin’ny ankavian-dalana, tany amin’ny lalam-pirenena voalohany, tany Ambohimitarona, Miarinarivo, ny 23 avrily teo, tamin’ny 11 ora atoandro. Olona miisa valo no naratra tamin’ity loza ity. Nalefa any amin’ny hopitaly CHR Miarinarivo ireo maratra.
Tahaka izany ihany koa ny niseho tany Manankazo Ankazobe, ny 23 avrily lasa teo ihany, tamin’ny 9 ora maraina. Nivarina tanaty tatatra anaty fiolanana ny taksiborosy iray ka olona iray no naratra. Nentina avy hatrany teny amin’ny hopitaly ny naratra
Tonga tany amin’ireo toerana ireo ny zandary nanao ny fanadihadiana. Voalaza fa vokatry ny tsy fitandreman’ny mpamily avokoa ny nahatonga ny loza. Anisan’izany ny fandehanana mafy, kanefa tsy voafehin’ny mpamily ny fiara. Notanana avokoa ny mpamily hanaovana famotorana. Soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy tamin’ireto loza ireto.